I-China Balcony Window Kinzon50 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Iwindows yeBalcony -Kinzon50 yisilayidi esisha nesistimu yokujika enezinhlaka. Le windows ye-balcony inika amandla amaphaneli ahambisanayo ahambisanayo ukuthi ahanjiswe ngokuqondile endaweni eyodwa noma zombili izinhlangothi. Iwindows yeBalcony -Kinzon50 ingasebenzisa ingilazi engu-5 + 9A + ingilazi eshiswa kabili noma ingilazi eshisayo engu-8mm. Futhi iwindi le-balcony linephrofayili ekhethekile eseceleni enesihluthulelo sokujika esingenakwenza igebe phakathi kwamapaneli engilazi. Ububanzi obukhulu bewindows ye-balcony i-Kinzon50 ingu-650mm futhi ukuphakama okungama-2000mm kwiphaneli ngayinye yengilazi. Umsindo ophansi, okokugqoka okuncane, okushisa nokubandayo okugijimayo okuphezulu.
Izici zewindows ye-balcony Kinzon50 zenza ukuthi ukuhlanza amafasitela kube lula kakhulu, ungahlanza i-reverse ne-facade ngayo yonke ifasitelana lengilazi. I-balcony efakwe ngefasitela le-balcony iKinzon50 ibukeka njengekhamera ye-balcony esobala, engagcini nje ngokulimaza ukubukeka nesitayela sesakhiwo, kodwa futhi inomthelela omningi ebuhleni obuhlanganayo be-balcony.Iwindi leBalcony -Kinzon50 liyasebenza kumaphrofayili engilazi ukugwema ukulimaza. Ukuvikelwa kufana nezitebhisi futhi ukubopha kungcono kakhulu.Akukho igebe phakathi kwamaphrofayili wethrekhi kanye namaphrofayili engilazi. Iwindi le-Balcony -Kinzon50 ayinalo igebe phakathi kwamaphaneli engilazi okuqala nawokugcina anama-profiles aseceleni.Iwindows yeBalcony -Kinzon50 isebenzise amasondo amakhulu athwala ibhola ukuze iPanishi ihambe kahle.
Isipiliyoni silingana nekhwalithi ngentengo efanelekile. Iwindi leBalcony -Kinzon50 inamakhasimende angaphezu kwesigidi anelisekile avela emazweni angama-40 neminyaka engama-20 yamava. Iwindi leBalcony -Kinzon50 inakekela zonke izinyathelo zenqubo, isekelwa ulwazi nesipiliyoni esiqhamuke kumashumi amabili eminyaka ocwaningo nokuthuthukiswa komkhiqizo.
amafasitela e-aluminium nezinkuni
Ingilazi eyodwa noma enolwelwe kabili
I-Fireglass / i-wire mesh
Khiya isivalo somnyango / isibambo somnyango
Esedlule: Uhlelo lwe-Balcony Glazing System Kinzon09
Olandelayo: Uhlelo lwe-Balcony Glazing System Kinzon06